Madaxweyne Biixi Miyuu Ku Khaldana Eedaynta Talyaaniga? Xigasho: Wargeyska Geeska Afrika. | Haldoor News
Madaxweyne Biixi Miyuu Ku Khaldana Eedaynta Talyaaniga? Xigasho: Wargeyska Geeska Afrika.
Hargeysa(Haldornews):-Madaxweynaha JSL Mudane Muuse Biixi Cabdi, markii uu Axadii ka soo laabtay safarkii uu ugu maqnaa dalka Guinea, waxa hadalkii uu saxaafadda siinayay ku daray eedo uu u jeediyay dawladda Talyaaniga oo nuxurkoodu ahaa in Talyaanigu hormuud ka ahaa culaysyada la doonayay in la saaro dalka Guinea iyo Madaxweynahooda si ay u baajiyaan soo dhawayntii uu dalka Guinea u sameeyay Madaxweynaha iyo weftigiisa.